Maalinta: Diseembar 12, 2018
Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara, ee caasimada, gaar ahaan baabuurta adeegga iskuulka, kormeer joogto ah. Furitaankii iskuulada kadib, koontaroolada sii kordhaya ayaa sii socda iyadoo aan la xallin, halka Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose iyo Kooxaha Boliiska Magaalada. [More ...]
Jiilaalka Xilliga Jadwalka Saacadaha ee magaalada Bursa
Waqtiga sugitaanka ee Magaalada Bursa Metro oo horey u ahayd daqiiqadihii 15 waxaa loo yareeyay daqiiqadihii 11 iyadoo qaboojinta cimilada. Jadwalka cusub wuxuu dhaqan gelayaa ka dib 12 bisha 21.00 Diseembar. Bilihii ugu dambeeyay [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay qaadeysay talaabooyinka lagama maarmaanka u ah baaxadda dagaalka lagula jiro xaaladaha jiilaalka. Iyadoo la raacayo maaraynta Xarunta Isku-dubbaridka Aafooyinka IMM (AKOM), shaqaalaha 7 bin 83 iyo gawaarida 1.357 waxaa loogu talagalay dadka deggan Istanbul inay ku qaataan jiilaal raaxo leh. [More ...]
mutaqbalka ugu weyn ee Turkiga Oyak Renault, kooxda ardayga ugu da'da weyn dalka Turkiga ee loo yaqaano University Boğaziçi Engineering Club dhacdo mustaqbalkiisa "Fuliyeyaasha la Management Study (MSA) 2018" daboolay abaabulay Bogazici [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Diyarbakır waxay dib u cusbooneysiisay Buundada Alipınar iyada oo loo marayo dayactirka iyo hagaajinta tareenka isku xira degmooyinka Yenişehir iyo Bağlar. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, Alipınar isku xira degmooyinka Yenişehir iyo Bağlar [More ...]
Xayawaanka Xawaarida ee Xawaaladda 4
Dowladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo ballackeedu yahay mitirka cusub ee '50 mitir' ee wadada cusub ee giraanta, oo dhowaan la bilaabay inuu u dhawaado dhamaadka dhismaha. Markii la dhammaystiro jidka cusub ee giraanta, tobaneeyo kun oo gaadiid ah oo ka socda Saddexda [More ...]
Kormeer Maqalka ah ee Manisa
Qeybta Gaadiidka Booliska ee Waaxda Gaadiidka ee Dowlada Hoose ee Magaalada Manisa, shirkadaha gaadiidka ee isdhaafsiga ayaa diiradda saaray kormeerka shirkadaha. Wareegtadan dhexdeeda, shirkadaha gaadiidka ee galaya kana tagaya Turgutlu Intercity Bus Terminal ayaa sidoo kale ah [More ...]
Maalgashiga 1 Billion 152 Milyan Liyuun ee Samsun ayaa sii socota
Degmada 'Samsun' ee Magaalo-Weyne ee degmada 17 adeegga 'iyo maalgashiga' dabeysha ayaa socota. Duqa magaalada Zihni Sahin, daaweynta weyn ee biyaha wasakhda ah ee biyaha la cabbo, tareenka fudud ilaa jannada shimbiraha ee qaybo badan oo ka mid ah maal gashiga weyn [More ...]
Qaybta kiiloomitir ee 10 kilomitir ee mashruuca socodka dheer iyo wadooyinka baaskiilka, oo gaari doonta xeebta harada Lake Sapanca laga soo bilaabo Sunnada Baaskiilka ee loo yaqaan 'Sunflower Bullcle Valley' ee ku taal Degmadda Sakarya Metropolitan District, waxay diyaar u tahay Mithatpaşa Wagon Park. 13 waxaa laga xaraeri doonaa Khamiista [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay siisay natiijooyinka tababarka la siiyay darawalada. SS 5. Darawalka 3, oo xiriir la leh Isbarbardhiga Isbarbardhiga Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalooyinka, wuxuu badbaadiyey 3 tababarradooda. Ku qanci shacabka halyeeygooda [More ...]
Gudoomiyaha gobolka Karabük Fuat Gürel ayaa maanta booqday Kardemir. Kuxigeenka Gobolka Barboros Baran, Agaasimaha Gobolka ee Deegaanka iyo Magaalooyinka Hasan Öztürk, Agaasimaha Caafimaadka ee Gobolka. Ahmet Sarı iyo İŞKUR Agaasimaha Gobolka [More ...]
Waxa laga hirgeliyey sida mashruuca ah in la beddelo doonaa qaddar ee Istanbul Canal ee Turkey sii wadaan in ay aheyn kordhiyo xiisaha shisheeye ee mashruuca. Arda Ermut, Madaxa Xafiiska Maalgashiga Madaxtooyada, Channel Istanbul [More ...]